प्रियङ्कासँगको अन्तरङ्ग दृश्यमा म नभएर सौरभ थियो - Muldhar Post
प्रियङ्कासँगको अन्तरङ्ग दृश्यमा म नभएर सौरभ थियो
पत्रपत्रिका खबर २०७५, १ आश्विन सोमबार 338 पटक हेरिएको
‘कथा काठमाडाँै’ चलचित्रमा प्रियङ्कासँगको अन्तरङ्ग दृश्यले अहिले चर्चा भइरहेको छ नि ? त्यो दृश्यलाई अन्तरङ्ग दृश्य, बेड सिन वा सेक्स भन्ने भन्दा पनि यो चलचित्र ‘कथा काठमाडाँै’को दुई पात्रबीचको एउटा यात्रा भन्न रुचाउँछु । यो बेड सिन, सेक्स सिन भन्दा पनि यो चलचित्र भित्रकी नारीको पीडा हो । जुन पीडा समाजका नारीले जानी नजानी भोगिरहेका छन् । अभिनय गर्दा कस्तो महशुस भयो ? प्रियङ्कासँग मेरो त्यो अन्तरङ्ग दृश्य जुनबेला खिचियो । त्यो समय म स्पोटमा थिइनँ । सो समय सेटमा मभन्दा पनि चलचित्रको क्यारेक्टर सौरभ भन्ने थियो । मैले के सिन दिएँ, कस्तो दिएँ, मलाई थाहा थिएन । निर्देशक सङ्गीताले पनि मलाई चलचित्रको छायाङ्कन सेटमा कहिल्यै पनि प्रमोद देखिन भन्नु हुन्थ्यो ।
सिनेमाको हिरो, टिपटप बनेर हिँड्न त मनपर्छ होला नि हैन ? म एकदमै सरल भएर हिँड्न रुचाउँछु । सिनेमाको पर्दामा मलाई देखेकाले बाहिर देख्दा यो प्रमोद हो र ? होइन होला भन्ने गरेका छन् । मेरो सबै कोसिस के रहन्छ भने मानिसले मलाई कमै चिनुन् । म आफ्नो अनुहार चिनाउनुभन्दा सिन र कामले चिनाउन चाहन्छु । अहिलेको कुरा गर्ने हो भने ‘कथा काठमाडाँै’को प्रियङ्कासँग रमाइलो गर्ने मानिस होइन भनेर चिन्छन् ।आफूलाई कसरी फिट राख्नुहुन्छ ? रुममै एक्सरसाइजका धेरै सामग्री छन् । त्यसैले घरमै अभ्यास गर्छु । चलचित्रको कुनै भूमिकाको लागि केही गर्नुपर्यो भने क्लब जान्छु । अहिले ‘सिंहदरबार’ शृङ्खला अभिनयका लागि पाको देखिनुपर्ने भएकाले एक्सरसाइज छोडेको छु ।
पहिरनमा कतिको ध्यान दिनुहुन्छ ? खासै ध्यान त दिन्नँ । मेरो मनपर्ने कलर ह्वाइट हो । सट लगाएँ भने यही कलरको लगाउँछु । फिटिङ टिसर्ट, फिटिङ पाइन्ट प्रयोग गर्न मनपर्छ । मलाई लगाउन सबैभन्दा मनपर्ने भनेको घडी हो । घडी राम्रो ब्रान्डकै लगाउँछु । पूरा नभएको सपना ? समाजमा देखिने हरेक क्यारेक्टर लोभलाग्दा छन् । ती सबै क्यारेन्टर निर्वाह गर्न पाएको छैन । यी क्यारेक्टरमा बाँच्ने मन छ । बुबाआमाको बिजनेस गरोस् भन्ने इच्छा थियो । उहाँहरूको दुई चारवाटा गाडीको स्वरूप छ । म मलाई व्यवसायी बनाउने इच्छा थियो । कलाकार भएर नाच्ने गाउँने काम हाम्रो होइन भन्नुहुन्थ्यो । यो फिल्डमा करियर छैन भन्ने सोच पनि उहाँहरूमा थियो ।
रुचि ? अभिनय र खानेकुरा पकाउन रुचि छ । म भेजिटेरियन हुँ । तर मलाई प्रायः सबै डिस बनाउँन आउँछ । आफैले बनाएर साथीभाइलाई खुवाउन मनपर्छ । कस्तो खालको केटा तपाईं ? सिम्पल छु । सबैसँग मिल्न मनपर्छ । खेलकुदतिर भने धेरै रुचि छ । सानोमा सितोरियो कराँते खेल्थेँ । टेबुलटेनिस, स्केटिङ, फुटबल पनि राम्रो खेल्छु । घुमघाममा कतिको रुचि छ ? छ । हो, हल्ला नभएको, भीडभाड नहुने शान्त ठाउँ मनपर्छ । रोजेको व्यक्तिसँग डेटको अफर दियो भने ? नम्रता श्रेष्ठसँग जान चाहन्छु । नम्रता क्रिएटिभ माइन्ड भएको व्यक्ति लाग्छ । उनीसँग डेट जान पाए धेरै सिक्न पाइन्छ भन्ने आस छ । रातोपाटीबाट ।